Super Mario Run: 10M kurodha pasi uye 4M purofiti mumaawa makumi maviri nemana | IPhone nhau
Super Mario Run: mamirioni gumi kurodha pasi uye mamirioni mana mabhenefiti mumaawa makumi maviri nemana
Pablo Aparicio | | App store, IPhone mitambo
Mushure mezvose hype iyo yakaumbwa yakatenderedza yazvino Nintendo zita reiyo iOS, inotevera data haigone kushamisika chero munhu. China rapfuura, Super Mario Run yakamhara paApp Store uye munguva pfupi yakazoonekwa seye yakanyanya kurodha pasi application uye iyo yaigadzira mabhenefiti mazhinji. Nhasi, App Annie isa nhamba kusvika pakubudirira kweiyo yekutanga yepamutemo Mario mutambo weIOS: Mamirioni gumi kurodha pasi uye $ 10 mamirioni mubatsiro pazuva rayo rekutanga yehupenyu.
App Annie anoti zvichave zvinonakidza kuona kana Super Mario Run ichikwanisa kukunda Pokémon GO, zita rakakurumbira reNintendo neNiantic raive protagonist yemamwe mavhidhiyo umo mazana evanhu akaonekwa achimhanya kuti atore mukurumbira Pokémon. Uye zvakare, iyo kuenzanisa ichave zvakare inonakidza uchifunga nezve bhizinesi modhi inoshandiswa neese ari maviri mitambo.
Super Mario Run ichave anokwikwidza Pokémon GO?
Pokémon GO yakatorwa 100 miriyoni nguva yekuita purofiti ingangoita mamirioni gumi emadhora pazuva kwemavhiki matatu anotevera kuburitswa, achiisa rekodhi nyowani muApp Store. App Annie haafunge kuti Super Mario Run iri kurova Pokémon GO:
Pokémon GO inoshandisa freemium modhi ine sarudzo mukati me-app kutenga kuti uwane purofiti. Kubatsira kwayo paIOS kwakaramba kuchikura mumavhiki anotevera sevashandisi vazhinji vaiishandisa. Kune rimwe divi, Super Mario Run inopa imwe-nguva-ye-kutenga kutenga kwe € 9.99 kuvhura mutambo wese. Nekuda kweizvozvo, mubhadharo unotangira mutambo wakawedzerwa uye nekudaro mabhenefiti anowanzo kuve akaiswa mumazuva ekutanga ehupenyu hwemutambo.
Izvi zvinoita sekujekesa izvo isu tese tinofunga: vashandisi vanosarudza kutamba zita kuripa chero zvazviri uye vachikanganwa nezve-mukati-app kutenga, asi yevagadziri iyo freemium bhizinesi modhi iri nani kwazvo mairi chero mushandisi anganzwa kuda kutenga kwakabatanidzwa kutenga chero nguva kana iri diki, asi isu tinononoka zvishoma kana iyo ye-mukati kubhadhara iri mairi euros. Ndeupi bhizinesi modhi raunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Super Mario Run: mamirioni gumi kurodha pasi uye mamirioni mana mabhenefiti mumaawa makumi maviri nemana
Zve apple tv unoziva here painobuda?
Ini handifunge kuti ichabuda, zvakatove zvakavaomera kuti vabudise iyo ios nekuda kwemakwikwi nevanonyaradza.
Handifunge kuti ichapfuura, nekuti mumusika wemasheya zvikamu zveNintendo naDena zvakadonha
Varega kuita mari, chokwadi. Dai ivo vakaita kuti ive yakachipa, ivo mamirioni mana vangadai vakadonha.
BlackBerry inovhura yakazvimiririra mota lab muCanada
Apple ichakwidza mutongo weEuropean Union mune nyaya yeIreland